Dibloomaasi hore M. Caalim: “Hoos u dhaca kalsoonida ee madaxda waxaa sababay ayaga oo ah qurbojoog oo aan xattaa carruurtoodu dalka joogin oo hoteelo wada deggan” (dhegayso) – Radio Daljir
Dibloomaasi hore M. Caalim: “Hoos u dhaca kalsoonida ee madaxda waxaa sababay ayaga oo ah qurbojoog oo aan xattaa carruurtoodu dalka joogin oo hoteelo wada deggan” (dhegayso)
Oktoobar 3, 2018 2:27 g 0
Madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay hoos u dhacday ka lsoonida ay ku qabaan shacabkooda, sida lagu sheegay daraasad ay saameeyeen hay’adaha Ipsos Limited iyo Farsight Africa Research ayaa muujineysa in 48% ay rumeysan yihiin in waddanka uu ku socdo jihada saxda ah.
Madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya 55%.
Madaxweynaha Jubbaland 52%.
Madaxweyneyaasha Hirshabeelle iyo Galmudug 43%
Madaxweynaha Puntland 31%.
Madaxwaynaha Soomaaliya 67%
Raysal wasaare Xasan Cali Khayre ra’iisalwasaare Xasan Cali Kheyre 62% halka sanadkii 2017-kii ay ahayd 83%.
Hadaba aqoonyahan ahna dibloomaasi hore Maxamed Caalim kana faaloooda arrimaha Geeska Afrika ayaa ku sababeeyey hoos-u-dhaca kalsoonida ayada oo madaxda Soomaaliya iyo xubnaha dowladda federaalku ay yihiin qurbojoog aan xataa carruurtoodu dalka joogin, kuna nool hoteelo ku yaala magaalooyinka dalka oo aanay ahayn dad deegaan ah dalka jooga, dalka yaqaan, oo dadka kala yaqaan.
Caaqil Cabdiqani Maxamed Cali: “Adeer see ku dhici kadhaa askarigu inuu mushaarkiisa waayo wasiirkuna helo … oo xildhibaanku helo?” (dhegayso)
Faahfaahin: Madaxweyne Gaas oo u duulay Nairobi (dhegayso/sawirro)